izivakashi eziningi Russian bajwayele yokuthi emzini Pereslavl, ngokukhululekile ngelulela elisemaphethelweni aseningizimu ye Yaroslavl esifundeni, idume ngokuyinhloko amasonto alo zezindela, emkhathini eyingqayizivele edolobheni Russian lasendulo. Muva nje, Nokho, ngokwawo Pereslavl, nasezindaweni ezizungezile ngokushesha kancane kancane siguqulelwa engavamile Museum awuxhaxha sifinyelele izingcweti ziphila ndawonye nezinkawu nezingwenya grammofonami nama-platelet, lapho ukuzalwa yezinganekwane zithandelana kwentuthuko okusezingeni eliphezulu kwezesayensi nobuchwepheshe. Pereslavl Museum ezijatshulelwa yizivakashi efanelwa yinhlonipho.
Pereslavl: phakathi esedlule nesizayo
Pereslavl-Zaleski - omunye izindawo ozithandayo izivakashi ukuhamba emhlabeni Golden Ring. Umlando kwezinkolo ezazikulo muzi elahlekile in the mists isikhathi, lapho kwakukhona inyunyana East Slavic emazweni asembulungeni Kiev kuqala, bese - azungeze uVladimir futhi Yaroslavl. Umsunguli waleli dolobha, kukhulunywa okokuqala zazo sihlehlela emuva onyakeni 1152, ubhekwa owaziwa Prince Yuri Dolgoruky, okuyinto idonse endaweni elula eduze Yaroslavl.
Ngaphezu Yuriya Dolgorukogo amagama abo umlando ekhazimulayo Pereslavl nabomalukazana babo nabo bangena Alexander saseNevsky futhi uPetru. Owinile odumile we zamaJalimane Knights waqala uhambo wokuphila lapha, umbusi wokuqala Russian is lapha wabeka izisekelo ezikhazimulayo Russian Navy.
Ezisavuliwe eziningi namathempeli, izivakashi belulekwa ukuba ubone abadumile Spaso-Preobrazhensky Cathedral. Ngaphezu izakhiwo yokuqala kanye nemidwebo, ke idume ngokuba uyasinda endala maphakathi ezakhiwe itshe Russian.
Museums e Pereslavl: udla kusiphi isitolo, ukubona futhi yini isimangaliso
Pereslavl idume hhayi kuphela izakhiwo zalo isonto, kodwa futhi iminyuziyamu, iningi lazo ongeke ukwazi uhlamvu original kakhulu. Ngokwesibonelo, lapho usengayibona i iqoqo umxhwele ezinsimbini XVII -. Ikhulu lamashumi amabili, hhayi kuphela yasekhaya kodwa evela ePoland ngisho eJalimane? Iqoqo omangalisayo yemishini yokuthunga ezihlukahlukene ukuhlela kabusha, okuyinto kanye ngobuqili wasebenza wezingubo ezivela eRussia, e-Europe naseNyakatho Melika?
Eminyuziyamu Pereslavl - lokhu "Berendey House", lapho ungakwazi ukubuka bukhoma phezu kanjani ukwakha wobuciko yezandla; ERussia kuphela Museum of ewumngcingo-gauge nojantshi langa Pereslavsky esiqiwini lapho ungakwazi ukugcina futhi ukufunda eziningi zezilwane ezingavamile futhi izitshalo. Omunye ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva yiyona inganekwane Museum e Pereslavl. Naphezu kobusha yayo isihlobo, kakade wathola idumela esasiwafanele e kokubili ngabantwana nangabantu abadala.
Vakashela Museum zamaqhawe e Pereslavl. Kanjani ukuze uthole kule ndawo emangalisayo? Thola Pereslavl, uma ayikho uhambo Golden Ring, indlela elula esuka eMoscow. Kusukela Central Bus Station, okuyinto etholakala eduze metro station "Shchelkovo" amabhasi ukuze Yaroslavl, Kostroma futhi Rybinsk, esemgwaqweni endleleni Pereslavl, asuke eziqala ku eziyisikhombisa ekuseni kuze 11 ntambama. Uma uya ngesitimela, kungcono ukuze uthole kusuka eMoscow kuya Yaroslavl, futhi kakade kuwo - egibela ibhasi eya endaweni yakho.
Nokho, i-Museum of yezinganekwane e Pereslavl itholakala mayelana 25 ukusuka edolobheni, ngakho kuyoba kusadingeka ngebhasi noma itekisi. Kungcono ukusebenzisa izinkampani zezokuvakasha ukuthi uyozinakekela bonke ubunzima travel futhi ubuke Ukwakheka Museum.
Pereslavl futhi Museum yayo zamaqhawe
Indawo egcina amagugu esizwe abagqugquzeli wazikhandla ukuze izivakashi ezivela emhlabeni wangempela wathuthela emhlabeni wangempela ezinhle Russian inganekwane. Abavakashi uthole inqaba yangempela sokhuni, sizungezwe uthango oluphakeme, bagcina ngesango eliphahlwe imibhoshongo ezinamandla nge izintuba. Wangaphambili, eyenziwe ngendlela ngehele ubude ithwala izivakashi ngesikhathi Ili Muromtsa futhi Nightingale le inkunzi, lapho amandla nobuqhawe wabangisa ongcolile.
Ingaphakathi Museum nasezindaweni ezizungeze yangaphandle
Ingaphakathi enqabeni, Museum futhi kwenza izivakashi ukukhumbula kusuka ebuntwaneni abadumile inganekwane futhi epics. Ngaphesheya square lwamakholi kumakhabheni zitholakala phakathi lapho izinto fabulous ezifana "itshe lapho kwakuphambana", Crow-ummemezeli, a kahle crane. Lapha aqhwakele kanye eziningi izinhlamvu sokhuni: Emelja ku esithandweni Prince Ivan, Bun. Ukuze izingane zikwazi ukuthatha ikhefu endleleni futhi izinkambo ngempela umbukwane emboniselweni futhi kuyinto ebaleni lokudlala ezivamile, Nokho, futhi, eyenziwe ubudala isitayela isiRashiya, njengalo lonke Museum zamaqhawe lokuzalwa. Pereslavl abathandwa izingane kanye nabantu abadala.
Indawo egcina amagugu esizwe zamaqhawe e Pereslavl abagqugquzeli professional kakhulu nabaqondisi. Ngisho nangaphambi kokuba kudalwe le eziyinkimbinkimbi omningi ku ukulungiswa project yakhe iyenziwa, ukukhethwa labo izosebenza ngqo nezivakashi. Naphezu kweqiniso lokuthi nesithakazelo esikhulu kule ndaba inganekwane, izivakashi ngentsha ngokukhethekile, nangabo abadala Ungase futhi sifunde kuwo eziningi nosizo nehuha.
Ukuqala ukuvakasha kungenxa uvakashele okuthiwa "Amahlathi Berendey", ngesisekelo okuyinto lo mbukiso kukhona izinganekwane kanye izinganekwane lwamaSlav empumalanga. Kuvele setfulo e engaphansi wahlomisa ngokukhethekile, ihlukaniswe linezingxenye ezincane ezimbalwa. Esimweni ngasinye kulezi "ezihlukanisa amahhovisi" kuyinto uhlamvu oluthile wasenganekwaneni, ulwazi mayelana nokuthi iziphi kunikezwa izivakashi ifomu poluigrovoy-polunauchnoy.
Kunezindaba yokuzalwa senzeka phambi kwamehlo ethu izivakashi. Ngemva kokuhamba ekamelweni nge namaqhawe belusizi we yeqhawe lesizwe, izivakashi singene ezweni ukukhanya ubuhle. Ungakwazi simazi kangcono ingoma "Apple Tree" kusukela inganekwane "Amahansi-ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi", simangalele isibindi Masha, aqhwakele ebhokisini of ibhere, donsa iphunga samanje okugeza Russian.
Iphela ukuvakasha ngokuvakashela okuthiwa "indlu yobukhosi", lapho, ngaphezu izinhlamvu kakade ajwayelekile, abahambi ungakwazi ukujabulela nombono kanye efudumele (uma ukuvakasha senzeka ebusika) lokhu esithandweni Russian ngokhethe. Kakade ngesikhathi uphume endlini elinde izivakashi show beneme ngokukhamuluka amahlaya, imilolotelo kanye eziyindida, umlingisi lomcoka owenza ukudlala futhi ngempela scary baba yaga.
Izici ezintsha Museum
Noma yimuphi Museum yesimanje ihlose ukuheha izivakashi hhayi kuphela Ukwakheka ezithakazelisayo, kodwa futhi ezihlukahlukene services ezengeziwe. Iyathinteka kanye Museum zamaqhawe lokuzalwa. Pereslavl idume izihambi yayo futhi ukunakekela zonke izivakashi. Museum zamaqhawe ngokuvamile kakhulu ubambe ezihlukahlukene kusihlwa interactive lapho izivakashi babe abahlanganyeli abagcwele ku ukubukwa fabulous. esimnandi kakhulu yiwona lokwentiwako, anikezelwe amaholide afana uNcibijane, Mardi Gras, ngobusuku buka-internet Ivana Kupala.
Futhi eduze ngokushesha Museum ikhefi "Ukhamba." Lapha okhathele angaletha lokuqala nelesibili izifundo, amakhekhe, itiye, ikhofi. Amanani yeningi kakhulu, ngakho bekhathazekile ngokuphepha we esikhwameni ngeke.
imiphumela ebalulekile futhi kufinyelelwe iziphetho ezinembile
Pereslavl ingenye yezinto ezithakazelisa kakhulu izivakashi izindawo emaphakathi neRussia. Ingqalasizinda, zomlando namasiko, ezihlukahlukene Museum nemibukiso wenze lokhu edolobheni "ukuyenga" akuyona kuphela Ongoti yasekhaya yezinto zakudala, kodwa futhi izihambi angaphandle.
It kufanela ngokuphelele ku ochungechungeni jikelele kanye yezinganekwane Museum e Pereslavl. He is bakulungele ukunikeza izivakashi zayo uhlelo ezithakazelisayo uhambo, yakhelwe kokubili izingane kanye nabantu abadala, kanye ezihlukahlukene izenzakalo interactive lapho izilaleli kalula abe ilungu.
Anapa sibhedlela "Rodnik": izinkomba, izibuyekezo nezithombe zezivakashi
Cuba Cayo Largo - ipharadesi
Ukushushuluza edolobheni: ski resort
Pie ne walnuts Ungadliwa
Gastroduodenitis Okungalapheki: izimpawu, ukwelashwa, ukudla. gastro oyingozi futhi ezingalapheki
IMAP olandelwayo, Mail ru: Uhlelo Lungiselela e-mail
Tver: mbukwane. Monuments, iminyuziyamu, izindawo zomlando Tver
Imithetho Declarative nezibonelo
Amathiphu: kangakanani ukupheka izinhlobo ezihlukene amakhowe
Preductal CF - incazelo ukulungiselela
Umholo ngokufaka umazisi. Indlela yokwenza imali phezu saqala inthanethi?